Why Join Us – Hanoolaato Somalia National Party
Maka Mid Noqonee Hanoolaato?
Kamid Noqo Hanoolaato
Lacag Nagu Deeq
Matahay muwaadin aaminsan in sharciga uu sareeyo?
Ma aaminsantahay in dalkaan aan dad kale lalasugin?
Maku dhibaysaa in dad keena ay dal keena ka cararayaan meeshi ay usoo carari lahaayeen?
Maku dhibaysaa xaq darada oo dal keena aad ugu badatay?
Marabtaa in intaas oo dhan wax laga qabto?
Hadii ay su,aalahaas iyo kuwo kale oo badan aad isweydiisay ama markii lagu weydiiayay aad dhibsatayay aadna jeceshay in xal loo helo. Hadaba anaga waxaan nahay Soomaali isku bahaystay in aan xal waara uhelno dal keena iyo dad keena, diyaarna u ah in aan inta iskaashano aan wax ka qabano.
Waxaa nahay muwaadiniin Soomaaliyeed oo Soomaalinimada dhuuxa kajirto. Sida sawirkaas oo kale, sikastoo naloo kala jarjaro waxaa uun soo baxaya Soomaali. Hanoolaato waa xisbi siyaasadeed oo u istaagay sidii ay dalkeena iyo dadkeena ugaari lahaayeen hor’umar la taaban karo.Waxaan rabnaa in aan Soomaliya kadhigno, Insha Allah, dal nabad ah oo barwaaqo ah oo qof walba oo kunool uu kufaraxsan yahay in uu ku noolaado.
Waxaan rabnaa in aan xaquuqda aadanaha oo dhan difaacno si qof walba oo Soomaaliya ku nool uu ugaaro nolosha ugu heer sareysa oo ay calafkiisa, tabartiisa, aqoon tiisa iyo dhaqdhaqaadisa gaarsiin karto.
Waxaan rabnaa dal ay fursada nolosha oo ay diinteenu ogoshanay oo dhan kamarnayn. Waxaan rabnaa in ay dad keena helaan aqoonta ugu wanaagsan oo binu aadam uu heli karo anagoo og muhiimada aqoonta, tan cilmiga iyo tan farsamadaba leeyihiin si loo helo bulsho wax qabad iyo wax soosaar leh oo iskugu filan nolosha ayaagoo Rabigood kaashanaya.
Waxaan rabnaa in uusan qof dambe oo Soomaali ahi uciishoon caafimad daro oo aysan dantu ku kalifin in uu asaga iyo familkiisa u cararaan dadal shisheeye ah caafimad daraadiis ama hadii aysan awoodaas dhaqaale laheyn cudur, xanuun ama dhaawac basiid ah oo aduunka intiisa kale si fudud loo daaweeyo ay ku keento geeri ama dhaawac uusan kasoo kabsan karin. Waxaan rabnaa in shacab keena ay dalkooda ku helaan fursado shaqooyinka adeega caafiimaadka, sida dhaqtarnimo, nurse i.w.l. Waxaan rabnaa in aysan gabdhaheena umul raacin adeeg caafimaad la’aantiis.
Waxaan aaminsananay in aan dhulka iska qaadi karno oo sidaan isku dhaami karno oo dan teena dad garan kara aan nahay.
Soo dhawoow. Gacmo iyo qalbac furan ayaan si diiran kuugu soo dhawaynaynaa.
Dad badan baan ka maqlay maxaan qaban karaa? Qaar kamid ah waxay dhahaan anigu hogaamiye ma’ahi, aqoon yahan ma’ahi, lacagna ma’lihi, marka maxaan qaban karaa? Marba hadii aad inta joogto waxaad kamid tahay dadka ay Hanoolaato aad ugu baahan tahay Soomaaliyana sidaas oo kale iyo si ka daran.
Your Nation Needs You. Hanoolaato Needs You.
SOOMAALIYA MAXAAD UQABAN KARTAA.
Soomaaliya way iska cadahay maanta in ay hiil u baahan tahay. Qof walba oo Soomaali ahai wuu ogyahay oo uma baahna in loo sheego. Dalkeenu wuxuu kujiraa intensive care oo mudo aad u dheer u hada ku jiray. Cudurka markuu qofku ku daahana wuu rajo dhigaa. Waan ognahay in cudurada ugu waaweyn oo qaran keena naafada ka dhigay waxay yihiin ee kartidii aan wax uga qaban lahayn oo kaliya ayaa maanta naga maqan. Waxaa maanta ugu weyn oo aan cad meel yaala unahay oo qofkii arkaba damco in uu qeyb ka goosto waa kala qeybsanaanta. Tan kuxigta waa hogaan xumi. Tan kaloo kusii xigta waa balwada qaadka oo dad keeno badankiis xoolo kadhigay ay dalalka qaadka soo saara meel ku xirteen oo daajiyaan, iska maashaan markay rabaana mid mid uqowracdaan. Dhibaatooyinka nahaysta dabcan intaan kuma eka laakiinm,
HANOOLAATO MAXAAD UQABAN KARTAA
Markii aad kamid noqotid Hanoolaato kow waxaad kamid noqotay dad Soomaaliyeed oo jecel dalkooda oo waliba aan halkaas ugaga tagin ee raba in ay wax un qabtaan si anagoo dhan iyo qaran keena aan hor,umarka aan ubaahanahay ugaarno.
Mid way cadahay. Qof kale masugayno. Dadka aan sugayno in ay nolosheena iyo qaran keena inoo hagaajiyaan waa anaga. Runt ahaantii xataa hadii ay dad kale rabaan in ay nacaawiyaan waa nagu ceeb in aan wixii aan anagu qabsan karno dad kale kasugno. Shaqsiyadeena kaliya ma,ahan waxay ay wax udhimayso in aan dad kale wax kasugno ee mustaqbal keena iyo awoodeena ayay wax u dhimaysaa. Wixii aad maanta qabsan, raadin sidii loo qaban lahaa ama isku dayin qabashadeeda mabarin kartid hadhowna mahaysid aqoonteeda iyo awoodii aad uqaban lahayn.
HADAAD HANOOLAATO KAMID NOQOTID
Waxaad helaysaa bulsho Soomaaliyeed oo aad isku fikir tihiin
Waxaad helaysaa meel aad firkirkaaga xor utahay oo aad lawaagi kartid dad walaalahaa ah oo aad isku meel wax uwadaan
Waxaan rajaynaynaa in ay kuu korto ama adiga aad walaalahaa ukordhisid aqoon oo ay kamid tahay dowladnimada wanaagsan, maamul wanaag, sida xisbiyada siyaasadeed ay ushaqeeyaan, sida dowladaha iyo dalalka ay ushaqeeyaan, waxyaalaha caqabadaha ku ay dowladnimada iyo sida looga gudbi lahaa etc
Waxaad kamid noqon kartaa hogaamiyaasha Hanoolaato
Hadii ay Hanoolaato xilka dalkeena lagu aamino, waxaad noqon kartaa dadka kooban oo masiirka Soomaalida wax kabadala ama kabadali kara
Hanoolaato waa komuniti dad kuwalaaloobay sidii ay danta dadkooda, dalkooda iyo diintooda saameyn wanaagsan ku yeelan lahaayeen. Kamid noqo dhismaha dal ay awlaadeena u aayaan. Kamid noqo kuwa yar oo taariikhda ay xusto in ay mustaqbalka dalkeena iyo dadkeena lajirsadeen.
Waxaan kaga mid noqday hanoolaato in aan ku qancay mabaadiidooda iyo daacadnimadooda. waxaa iicad in ay dhab ka tahay waxqabadka kooda”
Maxamed Ali Nuur